UThomas Dekker Ubetha i-Psychological Horror Gold ngo "Jack Uya Ekhaya" - iHorror
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	UThomas Dekker Ubetha iGoldological Psychorror Gold nge “Jack Uya Ekhaya”
UThomas Dekker Ubetha iGoldological Psychorror Gold nge “Jack Uya Ekhaya”
by Waylon Jordan Oktobha 12, 2016
by Waylon Jordan Oktobha 12, 2016 840 imbono
UJack Uya Ekhaya kuvakala ngathi sisihloko sehlaya lothando okanye idrama emnandi malunga nohambo lomntu lokubuyela kwiingcambu zakhe ukuze azifumane. Xa efika apho, uya kufumana iqela labantu abamthandayo kwaye bafuna ukukhulisa amaphupha akhe nokumnceda ukuba abe yeyona nguqulelo iphambili kuye. Enye yeefilimu ezishiya uziva wonwabile kwaye uzalisekisiwe xa iikhredithi ziqengqeleka.
Yiyo i NOT Ifilimu eyenziwe nguThomas Dekker. Endaweni yoko, njengawo wonke lo msebenzi wobugcisa wonakalisa ingqondo, isihloko sisiqhinga.
Njengoko kuvulwa ifilimu, uJack Thurlowe (uRory Culkin) uhamba malunga nobomi bakhe bemini xa efumana umnxeba. Abazali bakhe babe kwingozi yemoto. Uyise wabulawa, kodwa umama wakhe (edlalwa nguLin Shaye ongenakuthelekiswa nanto), nangona wayenamaqhuma kunye nemivumbo, usindile. Kungekudala usendleleni egodukayo eya kunina kwaye enze amalungiselelo omngcwabo kayise. Lo ngumzuzu xa ingxaki yakhe iqala ngokwenene.
Oku kulandelayo luhambo olucothayo olucothayo kwixesha elidlulileyo njengoko uJack esiza ubuso ngobuso ngeziganeko zobuntwana kudala wazicinezela. Njengoko amaphupha akhe amabi eqala ukuhlasela inyani yakhe, ilizwe lakhe lijikeleza ngokungalawulekiyo.
UCulkin unikezela ngokusebenza ngokuqaqambileyo njengoJack, ekrwada kwaye esengozini njengoko ingqondo yakhe ibekiwe. Isityhilelo ngasinye esiza simtshintsha kwaye umdlali werejista ubhalisa olo tshintsho kumzimba wakhe uphela. Andiqinisekanga ukuba ndakhe ndabona uCulkin enika ukusebenza okungcono. Into endiqinisekileyo ngayo emva kokubukela le vidiyo kukuba sinokulindela ukuba akhokele phambili rhoqo kwixesha elizayo. Ayisiyiyo kuphela inetalente emangalisayo, kodwa unawo amandla emvelo okulukuhla abaphulaphuli bakhe ukuba balandele yonke intshukumo yakhe kwiscreen.
Kwaye emva koko, kukho uLin Shaye. UShaye nguMeryl Streep welizwe elothusayo kwaye uyangqina, kwakhona, ukuba ungamandla okubalelwa kwindima kaTeresa, umama kaJack. Umzuzwana ngumama osengozini kunye nothando kwaye ngokulandelayo ubila ngomsindo nangogonyamelo. Uyenza njani loo nto ngokukholekileyo kwaye kubonakala ngathi kulula ukuyimangalisa njengowesifazane adlalayo.
UDekker ujikeleza isamente kunye neqela labadlali abanetalente kunye nabadlali. UDaveigh Chase (aka Samara kwi Iringi) ukhanya kwindima yomhlobo osenyongweni kaJack, kunye noLouis Hunter bencwina njengommelwane kaJack ongummelwane osondeleyo onokuthi okanye angabinazo iinjongo ezimbi. Jonga ngokusondeleyo kwaye uza kuyibona iNikki Reed evela kwi Twilight I-franchise kunye ne-stint yakhe yamva nje njengo-Betsy Ross kwi-Fox's Umngxunya wolala.
Kodwa yonke loo talente iya kuba lilize ngaphandle komsebenzi omangalisayo ngasemva kwemiboniso. Iskripthi sikaDekker kunye nolwalathiso kugcina abaphulaphuli beqikelela, bangaze banike isiseko esomeleleyo sokuma. Ngobuchule usisusa kwinyani siye ekukhohlisweni kwaye sibuyele kwakhona njengamaqhekeza ebhodi yechess. Uloyiko kwifilimu luyinyani, kwaye okona kubi kuko konke, alunakuphepheka.
Idityaniswa nenqaku likaCeiri Torjussen kunye neAustin F. Schmidt's cinematography, le yifilimu enye ongafuniyo ukuyiphosa.
UJack Uya Ekhaya ikhutshwa kwimiboniso bhanyabhanya nakwi-VOD ka-Okthobha i-14, i-2016 ukusuka kwiMifanekiso yeXesha. Jonga uluhlu lwakho lwasekhaya kwaye ubone le ASAP! Lo mboniso bhanyabhanya yenye yeemvakalelo zokuhamba ngokuqinileyo okufanelekile ukukhwela.